अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी पनि कोरोना भाइरस’बाट संक्र मित’
March 9, 2020 935
अष्ट्रेलियामा एक आठ महिना’को बच्चा कोरोना भाइरस’बाट संक्रमि’त भएको बताइएको छ । योसँगै अष्ट्रेलिया’मा कोरोना भा’इरस संक्रमि’तको संख्या ५७ पुगेको छ । ती बच्चा एक इरानी महिलाको भएको पुष्टि’ भएको छ ।केही दिन अगाडि इरान’बाट फर्के’की उनी मेलेसि’याको विमान’मार्फत अष्ट्रेलिया आएकी थिइन् ।
अष्ट्रेलिया आएँसगै उनको कोरो’ना भाइ’रस परिक्षण’ भएको थियो । उनीमा कोरो’ना भाइरस’को संक्रम’ण नदेखिएको तर, बच्चा भने संक्र’मित भएको रिपोर्ट आएको हो ।हाल उनको उप’चार भइराखेको बताइएको छ ।
पछिल्लो मिडिया रिपोर्टका अनुसार अष्ट्रेलि’यामा कोरो’ना भाइर’सका कारण दुई जनाको मृ त्यु’भएको छ । त्यस्तै नेपालबाट हालै अष्ट्रेलियाको तास्मानिया पुगेकाका एक युवकमा को रोना भाईर’सको संक्रम’ण देखिएको छ । ती युवकको परिचय गोप्य’ राखिएको छ । २० वर्षिय ती युवक गत फेव्रवरी २६ मा सिंगापुर र सिड्नी हुदै तास्मानिया पुगेका थिए ।
शनिवार ती युवकमा को’रोना संक्रम’ण भएको रिपो आएको हो । उनको रोयल होवार्ट अस्पताल’मा आईसोलेसन’मा राखेर उपचा भईरहेको छ । यससंगै तास्मानिया २ जनामा को’रोना भाईरस’को संक्रम’ण पुष्टी भएको छ ।
ति युवक नेपाल’बाट आउने बित्तिकै रुघा र ज्वरो’को लक्षण देखि’एको थियो । यात्राको थकानले होला भनेर सामान्य रुपमा लिएका युवक काममा फर्किएका थिए । उनी कलेज’ पनि पढ्न गएका थिए ।तर, केही दिनपछि रु’घा र ज्व’रो बढ्दै गएपछि उनी परिक्ष’णका लागि अस्पता ल पुगेका थिए । चिकित्सकले उनलाई परिक्ष’णको नतिजा नआउन्जेल सेल्फ आईसोले’सनमा बस्न निर्देशन दिएका थिए ।
तर, ती युवकले चिकित्स’कको कुरा अटेर गरि काम र कलेज जाने क्रम जारी राखेका थिए ।शनिवार कोराे ना संक्रम’ण पुष्टी भएपछि उनले पढ्ने कलेज र काम गर्ने होटलमा पनि सरेको हुनसक्ने भन्दै स्वास्थ्य अधिकारीहरुले अनुसन्धा’न सुरु गरेको एबि’सीले जनाएको छ। – सीधाकुरा
Prevसबै युवाहरुलाई लठ्ठै पार्ने यी सुन्दर युवती को हुन् ? हेर्नु`होस्….
Nextफेरि देखिए सोनिकासँग पारस, सोनिका बारे पहिलो पटक पारसले यसो भने [ भिडियो]
उत्तर कोरियाका नेता किम जोङले रुँदै जनतासँग माफी मागे..(भिडियो सहित)
प्रह’री भन्छ, ‘डाक्टर केसीलाई संक्र’मण छ’ डाक्टर केसी भन्छन्, ‘म संक्रमित होइन’ (भिडियो सहित)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (136457)